सुशा`न्तका फ्यान`हरूलाई आयो खु`सीको खबर !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/सुशा`न्तका फ्यान`हरूलाई आयो खु`सीको खबर !!
सुशा`न्तका फ्यान`हरूलाई आयो खु`सीको खबर !!
हलिउडका फिल्मी ट्रेलरलाई पछाडि पार्दै अत्या`धिक भ्युज, लाइक, कमेण्ट पाउने ट्रेलरको कृतिमान आफ्नो नाममा पार्न सफल भयो `दिल बेचारा´को ट्रेलरले। यो सबै फ्यानहरूले सुशान्तलाई दिएको माया हो।
सुशा`न्तका फ्या`नहरूका लागि खु`सीको `खबर आएको छ। २४ जुलाईका दिन सुशा`न्तको अन्तिम फिल्म `दिल बेचारा´ डिज्नी प्लस हट`स्टारमा प्रदर्शन हुने भएको छ। खुसीको कुरा त के छ भने यो फिल्म उनका फ्यानहरूले बिना सब्स्क्रीप्सन हेर्न पाउने भएका छन् । अर्थात बिना कुनै शुल्क सित्तैमा यो फिल्म हेर्न पाइने छ।
यो खबरले सुशा`न्तका फ्यानहरूमा निकै उ`त्साह थपिएको छ। साथै सुशान्तको अत्याधिक रुचाइएको टेलि शृङ्खला `पवित्र रिस्ता´ पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। सुशान्तलाई उनका फ्यानहरूले धेरै मिस गरिरहेको र सो धारा`वाहिक पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेकाले यसो गर्न लागिएको जानकारी पवित्र रिस्ताकी निर्मात्री एकता कपुरले बताएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाका जेठ १८ गतेसम्म बन्द गर्ने सर`कारको निर्णय !!
सरकारले थेग्न सकेन दवाव, हुने भयो आन्तरिक हवाई उडान मिति पनि तोकियो
बोटलको पानी १० रुपैयाँमा बेच्ने !!